Puntland: Guddiyada federaalku waa ka mamnuuc degmooyinka aan maamulno – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland: Guddiyada federaalku waa ka mamnuuc degmooyinka aan maamulno
Maamulka Puntland ayaa markale ku dhaqaay tilaabo carqalad ku noqon karta huorumar laga sameeyo dhaqaaqa dowladda fedreraalka ah ee Soomaaliya, isagoo deegaanadii ka mamnuucay 3 guddi oo ay dhawaan dowladda Soomaaliya magacaawaday.
Golaha Xukuumadda Puntland ayaa maanta oo arbaca ah isugu yimid shirkoodi caadiga ahaa, uuna shir guddoominayey Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Camey ayaa soo saaray go’aan ah:
In Guddigaya Xuduudaha, Doorashooyinka iyo Golaha Adeegga Garoorka aysan tegi karib degmooyinka uu ka taliyo maamulka Puntland, iyagoo ku andacooday in guddiyadaasi aysan sharci aheyn.
War-saxaafadeed ka soo baxay shirka golaha Wasiirada ayaa lagu sheegay in Puntland mar kale ku celineyso in guddiyada Dowladda Federaalku ku dhawaaqdey todobaadkii hore ay yihiin kuwo baal marsan Dastuurka Soomaaliyaa oo ay ahayd in laga wada tashto, sida warka lo yiri.
Maamulka Puntland ayaa sheegay inuusan guddiyadaas la shaqeyn doonin isla markaana aysan Puntland cag soo dhigi karin.
Markii Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo todobaadkii hore ansixiyey 3-daas guddi ayaa waxaa durba si kulul u mucaaraday maamulka Puntaland, oo maanta soo kordhiyey iney guddiyadaas ka mamnuuceen degmooyinka ay ka taliyaan.
Dhanka kale, Puntland ayaa sheegay in aysan jirin ciidamo AMISOM ah oo la geynayo hallaas, “Waxaan u sheegaynaa dhamaan daneeyaasha Puntland iyo shacabkaba in aan ku filanahay amnigayaga, Puntland laguma khasbi karo in dhulkeeda la keeno ciidamo shisheeye” ayaa lagu yir war-saxaafadeedka.
Wasiirka difaaca oo la kulmay guddiga isku dhafka ciidanka Soomaaliya